Madagasikara – Swaziland : Hihamafy ny fifandraisan’ny firenena roa tonta -
AccueilRaharaham-pirenenaMadagasikara – Swaziland : Hihamafy ny fifandraisan’ny firenena roa tonta
19/07/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nigadona teto Madagasikara, ny alatsinainy 17 jolay teo, ny Mpanjakavavin’i Swaziland, Ntombi Thwala, sy ny zanany lahy, S A Mavela, ary ny delegasiona mafonja ahitana vehivavy maro. Rehefa avy noraisin’ny minisitry ny Raharaham-bahiny ity Renin’i Swaziland ity, ny andron’ny nahatongavany teto Madagasikara, noraisin’ny Filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina, teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha, indray ity Mpanjakavavy ity, omaly.
Tamin’izany indrindra no niresahan’ny roa tonta ny fifandraisan’i Madagasikara sy Swaziland. Voaresaka àry fa hihamafy sy hohamafisina hatrany ny fiaraha-miasan’ny firenena roa tonta eo amin’ny fampandrosoana ara-toekarena, ny lafiny maha-olona, toy ny tontolon’ny fahasalamana, ny fampianarana, sns.
Ankoatra izay, noresahin’ny Filoham-pirenena tamin’ity Mpanjakavavin’i Swaziland fa maro ny ezaka vitan’ny Fitondram-panjakana eo amin’ny tontolon’ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza tamin’ny alalan’ny fikarakarana manokana ireo vehivavy voan’ny homamiadana. Teo ihany koa ny ezaka eo amin’ny tontolon’ny fampianarana, izay noraisin’ny vadin’ny Filoham-pirenena, Voahangy Rajaonarimampianina, an-tanana ny fananganana sekoly maro, ny trano famakiam-boky, ny fizarana fitaovam-pianarana, sns. Anisan’ny laharam-pahamehan’ny Filohan’ny Repoblika rahateo ny fanatsarana ny fahasalamam-bahoaka, tafiditra amin’izany ny reny sy ny zaza, ary indrindra ny fampidirana an-tsekoly ireo ankizy sy ny fanatsarana ny tontolon’ny fampianarana amin’ny ankapobeny.
Noho izany indrindra, tsy nohadinoin’ny Mpanjakavavy, Ntombo Thwala, ny nanasa ny vadin’ny Filoham-pirenena hitsidika an’i Swaziland.
Ankoatra izay, nanatitra ny taratasy manendry azy hiasa eto Madagasikara ihany koa ny masoivoho vaovaon’i Swaziland. Marihina fa sambany no nitsidihan’ity Mpanjakavavin’i Swaziland ity an’i Madagasikara.